उपदेश - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
आज बिहान म आफ्नो ऐनामा अगाडि उभिएँ र प्रश्न सोधेँ: मिररिंग, भित्तामा ऐनामा, सम्पूर्ण देशको सबैभन्दा सुन्दर को हो? त्यसोभए ऐनाले मलाई भन्यो: "कृपया तपाई तल जान सक्नुहुन्छ?" म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्छु: you के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ जुन तपाईं देख्नुहुन्छ वा तपाईंले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुहुन्छ? आज हामी विश्वासलाई नजिकबाट हेर्छौं। म एउटा तथ्य प्रस्ट पार्न चाहन्छु: ईश्वर जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्! भगवान तपाईंको विश्वास मा निर्भर छैन ...
येशूको प्रख्यात उखान: दुई व्यक्ति मन्दिरमा प्रार्थना गर्न जान्छन्। एउटा फरिसी हो, अर्को कर सor्कलन गर्ने (लूका १ 18,9.14...१)। आज, येशूले यो दृष्टान्त बताउनुभएको दुई हजार बर्ष पछि, हामी जानाजानी हप्काएर भन्न सक्छौं, "पक्कै, फरिसीहरू, आत्म-धार्मिकता र कपटको प्रतीक हो!" ठिकै छ ... तर हामी यस मूल्या assessment्कनलाई अलग राख्यौं र येशूमा दृष्टान्त कसरी कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ...
मेरो आँखाले तपाईंको उद्धार देखेको छ
ज्यूरिख मा आज को सडक परेड को आदर्श वाक्य हो: "स्वतन्त्रता को लागी नृत्य"। गतिविधि वेबसाइट मा हामी पढ्छौं: "सडक परेड प्रेम, शान्ति, स्वतन्त्रता र सहिष्णुता को लागी एक नृत्य प्रदर्शन हो। सडक परेड "स्वतन्त्रता को लागी नृत्य" को आदर्श वाक्य संग, आयोजकहरु पहिलो स्वतन्त्रता राखे "। प्रेम, शान्ति र स्वतन्त्रताको इच्छा सधैं मानव जातिको चिन्ताको विषय बनेको छ। दुर्भाग्यवश, जे होस्, हामी एक संसारमा बाँचिरहेका छौं कि ठीक छ ...
पुरानो नियम निराश आशाको कथा हो। यो भगवानको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको थियो कि प्रकाशबाट सुरू हुन्छ। तर धेरै समय सम्म मानिसहरूले पाप गरे र स्वर्गबाट ​​निकालिए। तर न्यायको वचनको साथ वचनको वचन आयो - परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभयो कि हव्वाको सन्तान मध्ये उसको एउटाले उसको टाउको कुच्च्यानेछ (उत्पत्ति 1..१3,15)। एक मुक्तिदाता आउनेछ। ईवा सायद आशा गर्‍यो ...
हामीले भर्खर हाम्रो छोरी र उनको परिवारलाई भेट्यौं। मैले एउटा लेखमा वाक्य पढें: "स्वतन्त्रता अवरोधहरूको अभाव होईन, तर छिमेकीलाई प्रेम नगरी गर्न सक्ने क्षमता" (फ्याक्टम /4 / /09 / 49))। स्वतन्त्रता अवरोधको अभाव भन्दा बढी हो! हामीले स्वतन्त्रताको बारेमा केही उपदेशहरू सुनेका छौं, वा यस विषयमा आफैंले अध्ययन गरिसकेका छौं। मेरो लागि यस कथनको खास कुरा के हो भने, त्यो स्वतन्त्रता त्यागसँग मिल्छ ...
धेरै वर्ष अघि मैले पहिलो पटक एउटा सन्देश सुनेँ जुन त्यस बेलादेखि धेरै चोटि मलाई सान्त्वना दिइयो। म अझै पनि यसलाई बाइबलमा आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्देशको रूपमा लिन्छु। यो सन्देश हो कि परमेश्वर सम्पूर्ण मानवजातिलाई बचाउनहुन्छ। भगवानले एउटा बाटो तयार पार्नुभएको छ जसमा सबै मानिस मुक्तिको लागि आउन सक्छन्। उहाँ अब आफ्नो योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, पहिला मुक्तिको मार्गलाई परमेश्वरको वचनमा भेटौं।
ख्रीष्टको जीवन खोस्न थाल्यो
आज म तपाईंलाई फिलिप्पीन चर्चलाई दिएको सल्लाह पालन गर्न प्रोत्साहन दिन चाहन्छु। उसले उनलाई केहि गर्न आग्रह गर्यो र मँ तपाईलाई यसको बारेमा के देखाउँछु र उही त्यस्तै गर्ने निर्णय गर्न तपाईलाई सोध्छु। येशू पूर्ण रूपमा परमेश्वर र पूर्ण मानव हुनुहुन्थ्यो। फिलिपीन्समा यसको ईश्वरीयताको क्षतिको कुरा गर्ने अर्को खण्ड पाउन सकिन्छ। «किनकि यो दिमाग तिमीहरूमा छ, जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो, जो उहाँ हुनुहुन्थ्यो जब ...
भगवान को पूरा कवच
आज, क्रिसमसमा हामी एफिससलाई लेखेको पत्रमा “परमेश्वरको हतियार” बोक्छौं। यसमा हाम्रो उद्धारकर्तालाई के गर्नुपर्दछ भनेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। पावलले यो पत्र रोमको जेलमा लेखेका थिए। उनी आफ्नो कमजोरीबारे सजग थिए र आफ्नो सारा भरोसा येशूमा राखे। “अन्तमा, प्रभु र उहाँको शक्तिको शक्तिमा दृढ बन। परमेश्वरको हतियार तान्नुहोस् ताकि तपाईं शैतानको क्रूर आक्रमणहरूको सामना गर्न सक्नुहुनेछ ”…
रक्सीलाई पानीको रूपान्तरण
यूहन्नाको सुसमाचारले एउटा रोचक कथा बताउँदछ जुन पृथ्वीमा येशूको कामको शुरुवात भएको थियो: ऊ विवाहमा गयो जहाँ उसले पानीलाई रक्सीमा परिणत गर्‍यो। यो कथा धेरै मा अनौठो हो: त्यहाँ के भएको थियो सानो चमत्कार जस्तै देखिन्छ, एक मेसेन्सिक कार्य भन्दा जादुई ट्रिकजस्तो। यद्यपि यसले केही अप्ठ्यारो अवस्थालाई रोक्दछ, तर यो त्यस्तो सीधा बिरूद्ध थिएन ...
पेन्टेकोस्टको सार्थक चाडले हामीलाई सम्झाउँछ कि पहिलो ईसाई चर्च पवित्र आत्मा संग छापिएको थियो। पवित्र आत्मा तब देखि विश्वासीहरु र हामीलाई साँच्चै नयाँ पहिचान दिनुभयो। म आज यो नयाँ पहिचान को बारे मा कुरा गर्दैछु। केहि मानिसहरु आफैलाई सोध्छन्: के म भगवान को आवाज, येशू को आवाज, वा पवित्र आत्मा को गवाही सुन्न सक्छु? हामी रोमी मा एक जवाफ पाउँछौं: «किनकि तपाइँसँग एक छैन ...
आजको समाज, विशेष गरी औद्योगिक संसारमा बढ्दो दबाबको चपेटामा छ: धेरै जसो मानिसहरू निरन्तर कुनै चीजको दबाबमा रहेको महसुस गर्छन्। व्यक्ति समयको अवरोध, प्रदर्शन गर्न दबाब (काम, विद्यालय, समाज), वित्तीय कठिनाइ, सामान्य असुरक्षा, आतंकवाद, युद्ध, गम्भीर मौसम विपत्ति, एकाकीपन, निराशा, आदि आदि बाट पीडित छन्। तनाव र उदासीनता दैनिक शब्दहरू, समस्याहरू, बिरामीहरू भएका छन् ...
मैले वर्षौंदेखि सुँगुरको मासु खानु परेको छ। मैले सुपरमार्केटमा "भाँडाको सासेज" किनें। कसैले मलाई भने: "यस भाँडो सॉसेजमा सुँगुरको मासु छ!" मैले यसलाई सायद विश्वासै गर्न सकिनँ। सानो प्रिन्टमा, यद्यपि यो सेतोमा कालो थियो। "डेर कासेनस्टर्ज" (एक स्विस टिभी कार्यक्रम) ने भित्ते सॉसेजको परीक्षण गर्‍यो र लेख्नुभयो: भाल सॉसेज बार्बेक्युजमा धेरै लोकप्रिय छ। तर प्रत्येक सॉसेज कि भाल सॉसेज जस्तो देखिदैन ...